Kooxaha Bayern Munich,Hannover iyo Stuttgart oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena 2-0 uga badisay kooxda Freiburg.
Kooxda Bayern Munich ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Arjen Robben,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Robben ayaa caawo goolkiisii 100-aad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Ciyaaryahan Thomas Mueller ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaa caawo badisay kulankii 20-aad oo xiriir ah oo ka tirsan horyaalka Jarmalka ee Bundesliga.
Kooxda Bayern Munich ayaa waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahanada kala ah Medhi Benatia iyo Xabi Alonso .
Kooxda Bayern Munich ayaa horyaalka Jamalka ee Bundesliga ku hogaamineyso 42-dhibcood,halka kooxda Freiburg ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Hannover 96 ayaa garoonkeeda HDI-Arena 2-0 uga badisay kooxda Augsburg.
Ciyaaryahan Salif Sane ayaa daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxda Hannover,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku laabatay qeybtii labaad ayaa ciyaaryahan Joselu gool labaad oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Hannover.
Kooxda Augsburg ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 24-dhibcood,halka kooxda Hannover 96 ay horyaalka uga jirto kaalinta sideedaad,iyadoo leh 23-dhibcood.
Kooxda Hamburger SV ayaa waxaa garoonkeeda Imtech Arena 0-1 uga badiyay kooxda VfB Stuttgart.
Ciyaaryahan Florian Klein ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda VfB Stuttgart.
Ciyaaryahan Georg Niedermaier ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Stuttgart.
Kooxaha VfB Stuttgart iyo Hamburg ayaa waxa ay leeyihiin min 16-dhibcood.